🥇 Ukubalwa kwemali yokulethwa enkampanini yezokuthutha
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 903
Ividiyo yokubalwa kwemali yokulethwa enkampanini yezokuthutha
Oda i-accounting ezolethwa enkampanini yezokuthutha
Ngokuthuthukiswa kwezinsizakalo ze-inthanethi zokuthengwa kwezimpahla, izinkampani zokuthutha zithole amakhasimende engeziwe. Ngisho nezitolo ezincane, ezizama ukumelana nomzabalazo ongalingani nezimbangi, zinikeza isevisi yokulethwa ukuze kube lula kumakhasimende. Uma kuziwa enkampanini ebambe iqhaza ngokuqondile ekuthuthweni kwezimpahla, inhlangano enekhono yenqubo yomsebenzi kanye nokubika kuzosiza ukuhlala kule ndawo. Ngokubala ngendlela efanele ukulethwa enkampanini yezokuthutha, akukwazi ukugcina isikhundla sayo kuphela emakethe yezimpahla nezinsizakalo, kodwa futhi nokuqhubekela phambili.
Ukulawulwa kokulethwa enkampanini yezokuthutha kubalulekile hhayi kuphela enhlanganweni yangaphakathi yomsebenzi. Ukulethwa sekwephuzile, ukulinyazwa kwezimpahla kanye nezinye izinkinga eziphakamayo kule mboni kufanele kubonakale ekubikeni nasekubalweni kwezimali ukuze kuthuthukiswe amasu okunciphisa izikhathi zokuthengiselana kanye nezindleko zokuthutha. Amarekhodi ezokuthutha enziwe kufanele ahlanganise zonke izici, anikeze ulwazi oluphelele.
Njengoba zibambe iqhaza ekubalweni kwezimali nasekulawuleni, izinkampani zokuthutha emgwaqeni zakha amamodeli athile okulawula izimo, ukugcina ukubika nokugeleza kwemibhalo ngokujwayelekile. Ukulawula nokubalwa kwezimali zokulethwa enkampanini yamaloli kusiza ukulawula izithunywa, isikhundla sezimpahla, izikhathi zokufika, ukuhamba kwezimoto. Kukhona izinhlelo ezibonisa isikhundla seyunithi yokuthutha ngesikhathi sangempela, esihlinzeka ngokuxhumana okuqhubekayo nomshayeli. Lokhu kuhlanganisa nokubalwa kwemali kaphethiloli osetshenzisiwe, izindleko zokulungisa, izinhlawulo zokungalethiki (ukubambezeleka, ukulimala noma ukulahleka kwephasela). Ilandela umkhondo wamaholo abashayeli kanye nabanye abasebenzi.
Iminyango yezinkampani ezihambisa izimoto ezibhekele izimoto iphinde igcine amarekhodi azo, ilandelele isimo sazo, igcwalise amadokhumenti ahlobene (isibonelo, okuguga), ihlaziye inzuzo yokusebenzisa imoto ethile ngokuhambisana nebanga kanye nokubalwa kwemoto. uphethiloli wayo. Lolu lwazi luboniswa ekubalweni kwemali yenkampani yokuthumela. Sifingqa imiphumela yokubalwa kwezimali kweminyango ethile, sithola idatha evamile kuyo yonke inkampani. Ngenxa ye-accounting enjalo, kwenziwa hhayi kuphela ukulawula isimo semikhumbi yezimoto, kodwa naphezu kwezimali zebhizinisi ngokwalo.
Njengoba ubona kulokhu okungenhla, ukubalwa kwezimali akulula. Akukhona njalo ukuthi ongoti bomnyango we-accounting abagcina amarekhodi ezinkampani zokuthutha bakwazi ukuzimela ngokuzimela zonke izinkomba. Izinhlelo ezikhethekile ezenza izinqubo eziningi zisiza ngokuzenzakalelayo ezindabeni ezinjalo. Isibonelo, isofthiwe (isofthiwe) izokwenza ukubalwa kwezinkomba empumelelweni yokulethwa, inkampani, ukulawula ngemizuzwana nje. Uma kuqhathaniswa, umuntu ubezochitha isikhathi esiningi esesigabeni sokuqoqa imininingwane edingekayo yokubalwa kwezimali nokubala.
I-Universal Accounting System (USU) iyi-software - ehamba phambili ekubalweni kwezimali, ekubikeni nasekubhalweni. I-Accounting System yenza ngokuzenzakalelayo inani lemisebenzi eyenziwe mathupha ngaphambilini. Kuhle ukubalwa kwezimali ukulethwa enkampanini yezokuthutha kakade ngenxa yokuthi ikhono layo lokuhlanganisa nemishini likuvumela ukuthi uthole izinkomba ozifunayo ukude, ngokuzenzakalelayo kanye ne-intanethi.
Ukulawula okuzenzakalelayo kwezimoto enkampanini yokulethwa.
Indlela entsha yokubala imali yokulethwa enkampanini yamaloli.
Ukuxhumana ngokushesha nomshayeli. Ikhono lokushintsha ukulethwa komzila usohambeni.
Lawula zonke izinkomba zezimoto ezithintekayo. Ukulandelela imigomo yesondlo, imigomo yokusebenza, amahora okusebenza, isikhathi sokuhamba.
Uhlelo olulula lokulandelela isikhathi sokusebenza se-courier, ukubala umholo wakhe. Ukuboniswa kwayo yonke imininingwane yokusebenza kuyo (ubude benkonzo, umsebenzi, imisebenzi eqediwe, iholo, ilivu yokugula, amabhonasi).
Imininingwane yomkhiqizo elula. Ikhono lokuhlela kalula idatha, thola iphasela ohlelweni ngenombolo, umkhiqizi, umamukeli.
Ukugcinwa kwamabhuku nokubalwa kwezimali kwenkampani yezokuthutha. I-Accounting System ifanele izinkampani zanoma yikuphi ukuma nosayizi. Kunoma yikuphi lapho ibhizinisi lakho lithuthukiswa khona, uhlelo luzokwazi ukulenza libe ngcono.
Ukwenza lula ukulawula izinkokhelo ezingenayo neziphumayo. Isofthiwe inohlelo lwezaziso olwakhelwe ngaphakathi oluzokutshela ukuthi usuku lomnqamulajuqu luyeza, ukuthi othile akakhokhanga ngesikhathi.
Ukwakhiwa okusheshayo kwemibiko yokulethwa kwezimpahla zokuthutha. Ukuboniswa kwazo zonke izinkomba ezifanele. Ikhono lokuhlunga kahle lezo zinkomba ongathanda ukwakha ngazo umbiko.
Ukukhiqiza umzila ohlelweni, kucatshangelwa zonke izitobhi nezindawo.
Isixhumi esibonakalayo sabasebenzisi abaningi.
Ukuvikelwa kwephrofayela yakho kanye nedatha yomuntu siqu.
Ukufinyelela kude. Okulula ukuthi endleleni ukufinyelela kolwazi oludingekayo kusala. Okudingayo yi-inthanethi.
Ukubuka konke kwesimo endaweni yokugcina izimpahla zokuthutha, ukubala ukuhamba kwemikhiqizo endaweni yokugcina impahla, ukuqapha ukuhambisana nemibandela yokugcina ehambisana nencazelo yomkhiqizo.
Ukuqinisekisa ukulethwa okusheshayo, ukuthuthukisa ukulandelela.
Amafomu e-Laconic emibiko anelogo yenhlangano yakho yezokuthutha. Kuboniswa kumafomu kuphela lezo zinto ezidingekayo esihlokweni esithile.
Isifinyezo sezinkomba zawo wonke amagaraji ezimoto, izithunywa, iminyango, njll.